टेलिकमको सिमकार्ड भारत र चीनमा पनि चल्ने, शुल्क कति ? | Seto Khabar
टेलिकमको सिमकार्ड भारत र चीनमा पनि चल्ने, शुल्क कति ?
काठमाण्डौँ, बैशाख १५ । भारत र चीनमा नेपाल टेलिकमको सिम चल्ने भएको छ । टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएपछि जीएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु चीन वा भारत गएको समयमा आफ्नै मोबाइलबाट नेपालमा कल गर्न सक्ने भएका हुन् ।
सोमबारबाट सुरु हुने यो सेवा अहिले तत्काललाई भारत र चीनमा लागू हुनेछ । भारत र चीनका स्थानीय मोबाइल अपरेटरका नम्बरमा समेत फोन गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
कम्पनीको वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत माघ २२ गते ‘प्रिपेड अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ’ सेवाको सफ्ट लन्च गरेको थियो । सो सेवालाई अहिले व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाईएको छ ।
कम्पनीले हालसम्म जीएसएम पोष्टपेड सेवामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेको थियो । अब भने प्रिपेड मोबाइलमा समेत यो सेवा प्रयोग गर्न सकिने छ । यसका लागि कुनै थप धरौटी राख्नु नपर्ने र आफ्नो मोबाइलमा भइरहेको ब्यालेन्सबाट उक्त सेवा प्रयोग गर्न सकिने छ ।